Kugovana zviitiko zveApple Watch zvinokurudzira kuti urambe uchiita mitambo | Ndinobva mac
Ndine chokwadi chekuti vashandisi vazhinji veApple smart wachi nhasi havazive sarudzo ye kugoverana chiitiko chatinoita nevamwe vashandisi veApple Watch, uye saka tinoda kugadzira chiyeuchidzo nezvazvo paNdiri paMac.
Chinhu chakanakisa nezvesarudzo iyi kuti ese aripo emamodheru ekuona anekuti anotikurudzira kuti tirambe tichiita mitambo uye kupfuura zvese inokutendera iwe "kuruma" nenzira ine hutano neshamwari uye nemhuri, saka muviri wedu uchatitenda.
Notices kubva kune vamwe zvinokupa iwe kukurudzira
Kana iwe ukatambira chiziviso kubva kushamwari kana nhengo yemhuri iyo ichangobva kuita zvemitambo chiitiko, chero chiri icho, tinozvikurudzira isu kuti titame. Uye zviri nyore kwauri kuti uzvisarudzire wega kana iwe uchigovana iyi mhando yeruzivo neshamwari. Kana chiziviso changogamuchirwa, tinokwanisa kukutumira meseji yekukurudzira kuitira kuti vaenderere mberi nayo kana kuzeza ne "Ini ndinogona kuita zvakawanda".
Kugonesa iyi sarudzo yekugovana zviitiko isu tinongofanirwa kuwana iyo Yekushandisa kunyorera kweiyo iPhone uye kurudyi kumusoro isu tine + chiratidzo. Tinodzvanya pane izvi uye menyu inowoneka yakananga kwatinogona kusarudza naani wekugovana zviitiko. Unogona nyora muzita rake kana kumutsvaga iye zvakananga mune yako yekunyoresa runyorwa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti riini iyo yekutaurirana inowanikwa mune grey, hatigone kugovera chiitiko data uye kana ichioneka mu pink, hongu. Kana chikumbiro chekugovana chiitiko chatumirwa, mushandisi anochigamuchira anogona kuchiramba kana kuchigamuchira, pamusoro pezvo, kana tangove tichigovana data rezviitiko, tinogona kunyaradza zviziviso, kuvanza chiitiko chedu kana kubvisa shamwari / nhengo yemhuri kubva pane izvi sarudzo pane yekugovana zviitiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kugovana zviitiko zveApple Watch zvinokurudzira kuti urambe uchiita mitambo
MaATM anopfuura gumi nematanhatu anotoenderana neApple Pay muUnited States
Sunungura kumusoro nzvimbo paMac yako neDisk Kuchengeta kwe1 chete euro